သင့်ဖုန်း အပူလွန်ကဲနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? – MyTech Myanmar
သင့်ဖုန်း အပူလွန်ကဲနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အပူချိန်ဟာ သင့် ဖုန်းအတွက် အကြီးမားဆုံး ရန်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းတွေမှာ စွမ်းရည်မြင့် Processor နဲ့ အရွယ်ကြီး ဘက်ထရီတွေကို ပါးလွှာတဲ့ကိုယ်ထည်ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားကြတဲ့အတွက် အပူလွန်ကဲမှု ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အပူလွန်ကဲလာရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဖုန်းဟာ ဘယ်အပူချိန်မှာ ရှိရမလဲ?
စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီတွေက ဖုန်းတွေကို ၃၂ ကနေ ၉၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် သို့မဟုတ် ၀ ကနေ ၃၅ ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်စ်အတွင်း ထားရှိဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။ ဖုန်း အပူချိန်ကို အရင်က ဖုန်းတွေမှာ Settings Menu ကနေ ပြသပေးကြပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းထုတ် ဖုန်းတွေမှာ မပြသကြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဖုန်း အပူချိန် ပြသပေးတဲ့ Third-party App များစွာ ထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ အဲဒီအထဲက Cooling Master—Phone Cooler—CPU Heat Minimizer , Battery Temperature နဲ့ Cooling Master—Phone Cooler Free, CPU Better တို့ကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။
ဖုန်းတွေမှာ ကွန်ပြူတာတွေမှာလို CPU တွေ ထည့်သွင်းထားပေမယ့် အပူလျှော့ချပေးမယ့် ပန်ကာတွေ မပါလာကြပါဘူး။ ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းတွေမှာ အပူချိန်လွန်ကဲလာရင် သတိပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ထည့်သွင်းထားကြပြီး အပူလျှော့ချပေးဖို့ တချို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အလိုလို ပိတ်ပေးကြပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပဲ အားကိုး မနေသင့်ဘဲ ဖုန်းကို အပူချိန်များတဲ့ နေရာတွေမှာ မထားဖို့ သတိထားရမှာပါ။ အပူချိန်များတဲ့ နေရာတွေမှာ အမြဲထားမိရင် သင့် ဖုန်း လုံးဝ ပျက်ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဖုန်းအားသွင်းနေချိန်မှာ အပူချိန်များတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အိပ်ယာပေါ်မှာထားပြီး အားသွင်းတာ၊ ခေါင်းအုံးနဲ့ စောင်တွေအောက်ထားတာတွေကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ မာကျောပြီး မျက်နှာပြင် ညီညာတဲ့ နေရာတွေအပေါ်မှာပဲ အားသွင်းသင့်ပါတယ်။
Unplug & Restart လုပ်ပါ။
သင့် ဖုန်း အရမ်း အပူလွန်ကဲနေရင် ရေခဲသေတ္တာထဲတော့ မထည့်ပါနဲ့။ အပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားရင် ဖုန်းကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ အဲဒီအစား ဖုန်းအားသွင်းထားရင် ရပ်လိုက်ပါ။ ပါဝါပိတ်ပြီး အေးမြတဲ့ နေရာမှာ ခဏထားလိုက်ပါ။ Case တပ်ထားရင် ချွတ်လိုက်ပါ။
နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ အားသွင်းကြိုး သုံးပါ။
သင့် အားသွင်းကြိုးမှာ အပြစ်အနာအဆာ ဖြစ်နေသလားဆိုတာ စစ်ဆေးပါ။ အတွင်းဘက်က ဝါယာကြိုးတွေကို မြင်နေရရင် မသုံးသင့်တော့ဘဲ အားသွင်းကြိုး အသစ်ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုပါ။ အကောင်းဆုံးက ဘူးထဲမှာ ပါတဲ့ အားသွင်းကြိုးကိုပဲ အသုံးပြုပါ။ အဲဒီ အားသွင်းကြိုးပျက်ဆီးသွားရင် သင့် ဖုန်းထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အားသွင်းကြိုးကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်သလို Anker လို နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီက ထုတ်တဲ့ အားသွင်းကြိုးကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုပါ။ မထင်မရှား ကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်တဲ့ ဈေးပေါတဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေဟာ စိတ်မချရပါဘူး။
ဘက်ထရီ စားသုံးမှုများတဲ့ App တွေကို ပိတ်ပါ။
သင့်ဖုန်းရဲ့ CPU ဟာ Game , Augmented Reality လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ GPS Navigation အတွက် အလုပ်အရမ်း လုပ်ရပါတယ်။ ဖုန်း အရမ်းပူလာရင် အဲဒီ App တွေကို ပိတ်ပြီး ဖုန်းကို ခဏ အနားပေးထားသင့်ပါတယ်။
တချို့ App တွေဟာ သင်မသုံးဘဲ နောက်ကွယ်မှာ Run နေတတ်ပြီး Android မှာ အဲဒီ App တွေကို Sleep လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအပေါ်မူတည်ပြီး ပြုလုပ်နည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ Android 11 ထည့်ထားတဲ့ Samsung Device မှာ ဆိုရင် Settings > Battery and device care ထဲသွားပြီး Battery Option ကို ရွေးချယ်ကာ Background usage limit ကို နှိပ်ပါ။ Put unused apps to sleep ကို On ပေးပါ။ မကြာခဏ အလိုလို ပွင့်လာတဲ့ App တွေကို Sleeping apps မှာ သင်ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းနိုင်သလို သင် ဖွင့်တဲ့အခါမှပဲ ပွင့်စေချင်ရင် Deep sleeping apps မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Category ထဲက + Icon ကို နှိပ်ပြီး App ကို ရွေးချယ်ပါ။ Add ကို နှိပ်ပြီး Sleep လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Update တွေကို Install လုပ်ပါ။
ဖုန်း ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ App Developer တွေဟာ Software Update တွေကို အမြဲ ထုတ်ပေးနေပြီး လုံခြုံရေး ဟာကွက်တွေကို ဖာထေးပေးသလို ဖုန်း စွမ်းရည်ကို မြင့်မားစေပါတယ်။ သင့်ဖုန်းအတွက် Software Update ရရင် အသိပေးစာပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး Update လုပ်ပေးပါ။
Apple App Store နဲ့ Google Play Store မှာလည်း App တွေကို Auto Update လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ထားသင့်ပါတယ်။
Malware တွေကို စစ်ဆေးပါ။
သင့် ဖုန်း အပူလွန်ကဲတာဟာ Malware တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ iOS App တွေမှာ Android ဖုန်းတွေလောက် Malware မများကြပါဘူး။ Google Play Store မှာ Malware တွေကို Play Protect နဲ့ ကာကွယ်ပေးထားပေမယ့် ဒီထက် ပိုစိတ်ချရချင်ရင် Bitdefender, Kaspersky, Norton နဲ့ McAfee တို့လို နာမည်ကြီး Antivirus App တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Ref : pcmag
MyTech Myanmar2021-09-18T12:37:52+06:30September 17th, 2021|HowTo, Tips & Stories|
Facebook ဟာ အမေရိကန်မှာ Podcasts အတွက် Audio hub ကို ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ
Cryptocurrencies တွေဟာ စည်းမျဉ်းမရှိဘဲ ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်ကြောင်း IMF သတိပေး
Android အတွက် Chrome မှာ Page Zoom လုပ်ဆောင်ချက်သစ် ထည့်သွင်းပေးတော့မဲ့ Google
အပြန်အလှန်အချင်းများမှုဖြစ်လာနိုင်မဲ့ Tweet တွေဆိုရင် Prompt နဲ့သတိပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ Twitter